Eo ny tsirairay handinika sy hitsara… | NewsMada
Anisan’ny hirahiraina hatramin’izay ny hoe fanovana sy fiovana, rehefa te hahazo ny fon’ny vahoaka. Eny, hatramin’izao aza izany, indrindra amin’izao fifidianana izao, rehefa te hahazo ny vaton’ny mpifidy. 60 taona izao ny Repoblika ary 58 taona ny Fahaleovantena, tsy hita be ihany izay hoe fandrosoana ho an’ny vahoaka ifotony. Nahoana?
Mitranga mihemotra hatrany ny raharaha amin’ny hoe krizy miverimberina. Sasatry ny miarina? Tsy inona no antony fototra fa ny afitsoky ny mpitondra nifandimby, ahatsapan’ny vahoaka fa miharatsy andro aman’alina ny fiainany, ny fanantenany, ny hoaviny… Isaky ny misy fiovana na fanovana, toa tsara lavitra hatrany ny teo aloha.
Hafa sy tsara lavitra, ohatra, ny Repoblika I, raha ampitahaina amin’ny Repoblika II. Dia toy izany hatrany… Ny Repoblika II no tsara kokoa noho ny Repoblika III, ary mbola tsara lavitra koa izay Repoblika III izay mitaha amin’ny Repoblika IV. Solanga mihajoko andro aman’alina izany ny fiainam-bahoaka. Mandra-pahoviana?
Toa ny fandrosoan’ny tsy fanjariana sy ny ratsy no atao sy be vita, fa tsy izay tena fanatsarana ny fiainan’ny vahoaka ifotony sy izay hahasoa ny firenena. Anisan’ny mampikaikaika ny maro amin’izany, ohatra, fa miharatsy hatrany ny tsy fandriampahalemana, ny fidangan’ny vidim-piainana, ny tsy fisian’ny asa, ny ady tany…
Tsy inona fa noho ny mpitondra tsy mahafehy fanjakana: tsy misy fanarahan-dalàna, fisaraham-pahefana… Amin’izany, manjaka ny kolikoly, ny tsimatimanota, ny fivarotan-tanindrazana… Ailika amin’ny fidinana an-dalambe hoe manakorontana ny tsy fahombiazana, ialokalofana amin’ny jadona sy ny fampiasan-kery.
Izany no tena mila fiovana sy fanovana amin’izao? Fiankinan-doha amin’ny vahoaka tomponandraikitra fa tsy heverina lava ho toy ny zazabodo sy bado, mandray anjara amin’ny fampandrosoana, anaovana tamberin’andraikitra… Fa tsy fiankinan-doha amin’ny vahiny amin’izay atao rehetra. Misy an’izany amin’izao?
Eo ny tsirairay handinika sy hitsara: iza no tena izy?